UBoucher ukhethe ukugxila kokuhle bedliwa
UMARK Boucher umeqeqshi wamaProteas uthi kuzomele bagxile kokuhle abakubonile kuchungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa abaludlale neSri Lanka Isithombe: BACKPAGEPIX
UFUNA basheshe bakudlulise ukuphoxeka umqeqeshi wamaProteas, uMark Boucher, emuva kokuhlulwa yiSri Lanka ngo-2-1 ochungechungeni lwemidlalo yosuku olulodwa.
Kungenwe kowokugcina obuseR Premadasa Cricket Stadium eColombo, ngoLwesibili, zibambene ngo-1-1. ISri Lanka yanqoba owokuqala ngama-run angu-14, amaProteas abuyisa izinduku kowesibili ngama-run angu-67.
Kubhede zisuka eqenjini lakuleli emdlalweni wesithathu ngesikhathi lizama ukujaha ama-run angu-203 abebekwe yiSri Lanka. Ama-wicket awe elandelana, amaProteas azithola esenkingeni, eselahlekelwa ngabadlali abayisithupha esashaye ama-run angu-54 kuphela.
Ababhetha ngasemsileni bazamile bephosa amanye ama-run esivinaneni kodwa amaProteas agcine ekhishwe wonke eseshaye ama-run angu-125, iSri Lanka yanqoba ngawu-78.
"Siphoxekile ngoba abadlali bethu ababhetha ngasekuqaleni bonke badlale kahle kule midlalo emibili yokuqala," kusho uBoucher.
"Bonke bebelitholile ithuba lokudlala kodwa le nkundla ebesidlalela kuyona ibinzima kakhulu. Ukulahlekelwa ngama-wicket amathathu singakaqedi nama-over amahlanu nokulahlekelwa ayisithupha singakadlali ngisho ama-over angu-10, kusibulele.
"Ngiyabancoma abashwibi babo, benze umsebenzi omuhle futhi nalaba abanqaka ibhola bashaye into ecokeme."
AmaProteas agcina ukunqoba uchungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa ngesikhathi ehlula i-Australia ngoMashi. Asehlele endaweni yesishiyagalolunye kwi-log yeSuper League, okuyiyona esetshenziswayo ukuhlungela iNdebe yoMhlaba yango-2023.
UBoucher uthe sekumele baqhubeke nokuhle abakwenzile baphinde balungise namaphutha, babheke imidlalo ye-T20 ezoqala ngoLwesihlanu.
"Kumele sibhekisise ukuthi besidlalelaphi, bekungelula neze. Asinalo irekhodi elihle uma sidlala eSri Lanka, ikakhulukazi kule nkundla," kuqhuba uBoucher.
"Ngikhetha ukubheka okuhle esikwenzile. Sidlale ngaphandle kwabadlali abathile ababhethayo abanamava. Sazenzela phansi ngokuthi singawunqobi umdlalo wokuqala sesisethubeni elihle. Kwaba yishwa futhi ukuthi silinyalelwe ngukaputeni uTemba (Bavuma) esadlala kahle.
"Sidlale kahle emadlweni wesibili kanti njengoba besengishilo, besibhekene nesimo esinzima kulo mdlalo wokugcina salahlekelwa ama-wicket amaningi ngokushesha ngasekuqaleni.
"Kuningi okuhle esikwezile kulolu chungechunge. Kubuhlungu ukudliwa ngalolu hlobo kodwa sekumele sikushiye ngemuva, sibheke imidlalo ye-T20 ezoqala.
"Le midlalo isemqoka kakhulu ngoba sincane isikhathi esisele ngaphambi kokuthi kuqale imidlalo yeNdebe yoMhlaba kwi-T20.
"Akusiphethe kahle ukuthi sihluliwe kodwa kumele sithathe okuhle esikwenzile siqhubekele phambili,“ usho kanje.
Khonamanjalo: Iqembu labesizane lakuleli liluqale kahle uchungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa, liguqisa iWest Indies ngama-wicket ayisishiyagalombili eStanford Cricket Ground, ngoLwesibili ebusuku.
IWest Indies ikhethe ukubhetha kuqala yashaya ama-run angu-153. Elakuleli lifike kalula kuleso sibalo, lishaya ama-run angu-157 kuma-over angu-39.
Umdlalo wesibili uzodlalelwa enkundleni efanayo ngoLwesihlanu ngo-4 ntambama.